प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा केक बोक्न हेलिकोप्टर चाटर्डको चर्चा, देश काटेर खाएको भन्दै आलोचना !
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०५:३७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जन्मथलोमा जन्मदिन मनाएका तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्चासँगै आलोचना समेत शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनले केक बोक्नका लागि हेलिकोप्टर चाटर्ड गरिएको र नेपालको नक्शा अंकित केक काटिएको विषयमा आलोचना भएको छ । केहीले प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले लिम्पियाधुरा विनाको नेपालको केकलाई चक्कुले काट्दै टुक्राटुक्रा बनाएर खाएछन् भनेर व्यंग्य गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा.चन्द्र भण्डारीले फेसबुकमा लेखेका छन् –
दुस्खका साथ यो लेख्दैछु ।
जुन देशका जनताले भोकमा भुटेका मकै र ज्वरोमा सिटामोल पाएका छैनन । छोरा छोरी विदेशका विभिन्न ठाँउमाआफ्नो शरीर, रगत र पसिना रेमिटान्स संग साटी राखेका छन । पशुपतिमा लाशको विदेशी बाकस नआएको दिन छैन । त्यस देशका प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकप्टर चार्टर्ड गरि देशको नक्सा भएको केक काट्ने कसले सुझाव दियो लाज लाग्दैन?
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सव तेह्रथुम इवास्थित आफू जन्मेको घरमा धुमधामका जन्मोत्सव मनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका जन्मोत्सवका लागि आज आठराई गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा दिएको थियो । उनको जन्मदिन मनाउन संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई लगायत सहभागी भएका थिए ।
आज २०७६ फागुन ११ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
ट्रम्पको भ्रमणमा सुकुम्बासी बस्ती छेक्न ६ सय मिटर लामो पर्खाल !